Ads - Phone
Ads Phone	Phone
ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (အသစ်)/ new hand-sets | ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (တပတ်ရစ်)/ Second-Hand
ဤနေရာတွင် ဖုန်းနှင့် ဖုန်းအပိုပစ္စည်း မျိုးစုံ ဝယ်ယူနိုင်၊ ရောင်းချနိုင်ပါသည်။
New Ad | All Ads | My Profile | My Ads | Rules	25	Results 1 - 20 of 25	Content	Date	အလုပ္လုပ္ခြင့္ေလ်ာက္လႊာ	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (အသစ်)/ new hand-sets)
လစာေကာင္းေကာင္းႏွင့္အလုပ္လုပ္လိုပါသည္[...]	06-20-2016	105 Hit(s)	sexy	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (တပတ်ရစ်)/ Second-Hand)
sexy chat	05-13-2016	78 Hit(s)	လူပ်ဳိ	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (အသစ်)/ new hand-sets)
ခ်စ္သူအလုိ႐ွိပါတယ္	11-05-2015	93 Hit(s)	​ေရာင္​း	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (အသစ်)/ new hand-sets)
ဖုန္​း​ေရာင္​းရန္​	06-19-2015	88 Hit(s)	Samsung Note II	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (အသစ်)/ new hand-sets)
Official အလံုး။	05-26-2015	90 Hit(s)	Samsung Glaxy Note 2​ေရာင္​းရန္​႐ွိသည္​.	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (အသစ်)/ new hand-sets)
ဘူးႏွင္​့ပစ္​စည္​းအစံု။[...]	05-25-2015	85 Hit(s)	kophyo	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (တပတ်ရစ်)/ Second-Hand)
kophyo	04-26-2015	117 Hit(s)	handsetေရာင္းမည္	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (တပတ်ရစ်)/ Second-Hand)
Huawei G730-C00 အျဖဴေရာင္
ေခၚေစ်း-100000က်ပ္[...]	12-22-2014	146 Hit(s)	NEW APPLE IPHONE616GB/64GB/128GB FACTORY UNLOCKED	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (အသစ်)/ new hand-sets)
We areadealer of mobile phones, we are located in United Kingdom, we are here to serve you good an[...]	12-22-2014	211 Hit(s)	​ေရာင္​းမည္​	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (အသစ်)/ new hand-sets)
Huawei mate 7​ Gold 32GB ​ေရာင္​းမည္​ ၆သိန္း Huawei mate7White 16GB ​ေရာင္​းမည္​ ၄သိန္းခြဲ ဆက္​သြ[...]	11-30-2014	137 Hit(s)	GooD Second Handset	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (တပတ်ရစ်)/ Second-Hand)
Storage2GB - 16 GB , Upgrade to 128 GB
2 of Cameras & Speakers
In all of thes[...]	11-13-2014	286 Hit(s)	GooD Second Handset	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (တပတ်ရစ်)/ Second-Hand)
Storage ____16GB , 2GB , Upgrade >> 128 GB
2 Speakers ,2C[...]	11-13-2014	160 Hit(s)	​ေ႐ာင္​းမည္​	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (အသစ်)/ new hand-sets)
HTC Desire 816 250000
Grand2200000	11-06-2014	154 Hit(s)	15သိန္းတန္sim card ေရာင္းရန္ရွိသည္	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (တပတ်ရစ်)/ Second-Hand)
15သိန္းတန္simcard 5055 ေရာင္းရန္ရွိသည္
ေရာင္းေစ်း 290000[...]	10-30-2014	162 Hit(s)	99%ေကာင္းမြန္ေသာ galaxy tab2 10.1 ေရာင္းမည္	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (အသစ်)/ new hand-sets)
Samsung Galaxy Tab2 ( 10.1 ) .Model-P.5100.
Second.-Ha[...]	10-09-2014	159 Hit(s)	mgngy	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (အသစ်)/ new hand-sets)
ေရာင္ရင္	09-18-2014	142 Hit(s)	mayangone	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (အသစ်)/ new hand-sets)
အေရာင္းအဝယ္	08-31-2014	142 Hit(s)	Galaxy Tab 4	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (တပတ်ရစ်)/ Second-Hand)
Size-8.0 LCD screen
Original Charger and o[...]	08-30-2014	172 Hit(s)	IPhone 5S Gold ေရာင္းမည္	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (အသစ်)/ new hand-sets)
internal 8GB IOS 7.1.1 Ooredoo ok
freegift Ooredoo SIMcard	08-16-2014	215 Hit(s)	ဖံုး ေရာင္းလိုပါ သည္	(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (အသစ်)/ new hand-sets)
Sony Z တစ္လက္ ကိုင္ အသန္ ့	08-09-2014	192 Hit(s)	StartPrev12NextEnd
Restaurant equipment & accessories	(Shopping / ကုန်ပစ္စည်း မျိုးစုံ (အဟောင်း) / second-hand)
We would like to resell the package of restaurant'equipment & accessories with negotiate . Any body ...	03-09-2016	216 Hit(s)	Fyoo	(Shopping / ဖက်ရှင်၊ အလှကုန်)
X9533445zydidisficicicuf"...	12-19-2015	285 Hit(s)	Internet line	(Shopping / ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ အီလက်ထရောနစ်)
We would like to sell the internet line with the diamond package including all equipment and accesso...	03-09-2016	242 Hit(s)	Resell the Office'equipment & accessories	(Shopping / ကုန်ပစ္စည်း မျိုးစုံ (အဟောင်း) / second-hand)
We would like to resell the office'equipment and accessories . Anybody who interested to buy these i...	03-09-2016	232 Hit(s)	Who's Online